Kuuriya Wuqooyi oo mar kale tijaabisay Gantaal - BBC News Somali
Kuuriya Wuqooyi oo mar kale tijaabisay Gantaal
Lahaanshaha sawirka AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
Image caption Kuuriyada wuoqoyi waxa ay samaysay tijaabooyiin dhowr ah
Militariga dalka Mareykanka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay dhowr gantaal oo ah nooca riddada gaaban.
Gantaladan ay riday Xukuumada Pyongyang ayaa la sheegay inay guul dareysteen.
Sida uu sheegay milatariga mareykanka labo ka mid ah saddexdaasi gantaal ee kuuriyada woqooyi ay tijaabisay ayaa guul darreystay intii ay hawada ku sii jireen, halka midka saddexaadna uu qarxay wax yar uun ka dib markii dhulka laga gamay.
Tijaabadan ayaa la sameeyay saaka aroortii, waxaana si ka duwan tijaabooyinkii hore ee kuuriyada woqooyi ay sameysay bishii luuliyo ee sandkan, gantaaladan ayaanan ahayn kuwa qaaradaha isaga kala goosha balse waxa ay ahaayeen kuwa riddada gaaban.
Horaantii, xukuumadda Pyongyang ayaa shaacisay in ay eegeyso qorsha ah in ay gantaal ku riddo jasiiradda Guam ee dalka Mareykanka balse mareykanka ayaa sheegay in tijaabada gantaaladan cusub aysan wax halis ah ku hayn dhulka mareykanka.
Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in gantaaladan lagu riday badda dhanka bariga ku taal.
Daandaansigan ugu dambeeyay ee kuuriyada woqooyi ayaa ku soo beegmaya maalmo yar ka dib markii madaxweyne Trump uu sheegay in Pyongyang ay hadda dib uga guraneyso mowqifkeedii qallafsanaa ka dib markii hadallo kulul ay hawada isu mariyeen Washington iyo Pyongyang.